Iindlela ezi-3 zokuSebenzisa uPhando kuPhando oluNgcono lweNtengiso | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 13, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UHanna Johnson
Amathuba kukuba ufunda Martech Zone, sele uyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukwenza uphando lwentengiso kuso nasiphi na isicwangciso seshishini. Ngapha apha SurveyMonkeySikholelwa ekubeni ukwaziswa kakuhle xa usenza izigqibo yeyona nto ingcono onokuyenza ngeshishini lakho (nakubomi bakho bobuqu, nawe!).
Uphando olukwi-Intanethi luyindlela elungileyo yokwenza uphando lweemarike ngokukhawuleza, ngokulula, nangeendleko ngokufanelekileyo. Nazi iindlela ezi-3 onokuthi uzisebenzise kwisicwangciso sakho seshishini namhlanje:
1. Chaza iMarike yakho
Ngokuqinisekileyo eyona nto ibaluleke kakhulu kuphando lwemarike ichaza intengiso. Ungalazi ishishini lakho kunye nemveliso ezantsi kwisayensi, kodwa oko kukufumana kuphela ukuza kuthi ga ngoku. Ngaba abamhlophe, amadoda angatshatanga aneminyaka engama-30 athenga ishampu yakho, okanye ngaba amantombazana akwishumi elivisayo ngabona bathengi bakho? Impendulo yalo mbuzo iya kuba nefuthe elibi kwisicwangciso sakho seshishini, ke ufuna ukuqiniseka ukuba uzithembile kuso.
Thumela uphando olulula kubemi bakho kubathengi bakho, abathengi, okanye kwisiseko se fan. Sebenzisa itemplate eyenziwe yingcali, okanye wenze eyakho. Babuze malunga nobudala babo, isini, ubuhlanga, inqanaba lemfundo, kunye nezinto abanomdla kuzo. Buza ukuba bayisebenzisa njani imveliso okanye inkonzo yakho, kwaye ubuze ingxelo yabo. Okukhona ubazi ngakumbi ukuba ngoobani kwaye bayisebenzisa njani imveliso yakho, kokukhona uya kuba nakho ukubanikezela kwiimfuno zabo kwaye ubagcine bebuyela ngaphezulu.
2. Uvavanyo lweConcept
Qalisa Uvavanyo lweengcinga ukuvavanya impendulo yabathengi kwimveliso, uphawu, okanye umbono, ngaphambi kokuba ungeniswe kwimarike. Iya kubonelela ngendlela ekhawulezayo nelula yokuphucula imveliso yakho, ichonge iingxaki ezinokubakho okanye iziphene, kwaye uqiniseke ukuba umfanekiso okanye uphawu lwakho lujolise ngokufanelekileyo.
Beka umfanekiso weembono zakho zelogo yakho, umzobo, okanye intengiso kuvavanyo lwe-Intanethi kwaye wenze abaphulaphuli bakho bakhethe eyona bayithandayo. Babuze ukuba yintoni ebonakalayo kubo, yintoni umfanekiso obenza bacinge kwaye bazive.
Ungathini ukuba into ofuna impendulo kuyo ayingomfanekiso okanye ilogo, kodwa ngumbono? Bhala isishwankathelo esifutshane ukuze abaphenduli bakho bafunde. Emva koko babuze ukuba bakhumbule ntoni, baphendula bathini, zeziphi iingxaki abanokuzilindela. Abantu abohlukeneyo baya kubona imiceli mngeni eyahlukeneyo kunye namathuba kwimbono yakho, kwaye ingxelo yabo iya kubaluleka njengoko uzilungisa kakuhle izicwangciso zakho.
Andazi ukuba ufikelele njani ngabaphulaphuli bakho? Inye onokuthetha nayo…
3. Ukufumana ingxelo
Nje ukuba uchaze inani labantu kwintengiso yakho, kuvavanye izimvo zakho, kwaye uyile imveliso yakho, likhona elinye inyathelo elibalulekileyo kwinkqubo. Ukucela nokucazulula ingxelo Kubalulekile ukuba ufuna ukuqhubeka nokuzisa iziphumo ezilungileyo. Fumanisa into oyenze kakuhle, yeyiphi imiba abantu abanayo, kwaye loluphi ulwalathiso abangathanda ukuba uluthathe kwikamva.
Awudingi ukuthatha zonke iingcebiso ozifumanayo xa ucela ingxelo. Kodwa ngokuyicela kwaye unake into ethethwa ngabantu, uya kuba ukulungele ngcono ukuphumelela kwiinzame zokuyila ezizayo. Abathengi bakho bayakuxabisa ukuba ubuzile, kwaye bayakuxabisa ukuphucula okwenzayo nangakumbi.
Akunyanzelekanga ukuba wenziwe ngemali ukuze ubandakanyeke kuphando olusebenzayo lweemarike. Kufuneka usebenzise izixhobo ezingabizi kakhulu kwi-intanethi. Kwi SurveyMonkey Sisoloko sisebenza ukuphucula iteknoloji ukukunceda wenze izigqibo zakho ezilungileyo, ezinolwazi. Ngokuthumela uphando ukufikelela kwimarike ekujoliswe kuyo, unokuqinisekisa ukuba iinzame zakho zisebenza ngokusemandleni akho.
tags: ukuvavanywa kwengcingalwabantuuphando lwemakethiuphando kwi-intanethiingxelo yemvelisoSurveyMonkeyuphando lophando lweemarike